China Vacuum Pre Lamination Car windshields ဖုန်စုပ်ကွင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | Fuzuan
PVB ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လေကာမှန်လိုင်း ပွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ဖုန်စုပ်စက် ကြိုတင် Lamination ကားလေကာမှန်များ ဖုန်စုပ်ကွင်း fu...
ကားလေကာမှန်အတွက် ကွေးထားသော မှန်အဝတ်လျှော်စက်များ
Bando Pre-processing Auto အတွက် Servo loading machines...
Vacuum Pre Lamination ကားလေကာမှန်များ ဖုန်စုပ်ကွင်းမီးဖို
အသုံးပြုမှု- လေထုတ်စက် မော်တော်ကား
လိုအပ်သောဖန်များ- ကားအတွက် ရှေ့လေကာမှန်များကို အကာအရံတပ်ထားသည်။
ထိရောက်မှုအနံ: 2000 မီလီမီတာ
အများဆုံး Glass Size : 2000*1300 mm အနိမ့်ဆုံး Glass Size : 1000*500 mm
ဖန်သားအထူ- 3.2 မီလီမီတာ –6မီလီမီတာ
စွမ်းရည်- 16s/pc (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
ကွေး၏အတိမ်အနက်- Max. 250mm
ကွေးကောက်မှု- အများဆုံး။ 50mm
အအေးခံချိန်- ၂၂ မိနစ်
ပူသော ဖုန်စုပ်ချိန်- ၁၄ မိနစ်
သယ်ယူနိုင်သော Glass ပမာဏ Conveyor: 200 pcs (စိတ်ကြိုက်)
အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် စက်ပစ္စည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ
ဆိပ်ကမ်း- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်
အမှတ်တံဆိပ်- FUZUAN စက်
မူလအစ- Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ
ကနဦးဖိအားမှာ ဖန်သားနှင့် အလယ်အလတ်ဖလင်ကြားရှိ လေကို စွန့်ထုတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို တံဆိပ်ခတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Laminate အတွင်းရှိ ပူဖောင်းများကို လုံးဝဖယ်ရှားပြီး မြင့်မားသော ဖိအားနှင့် ခိုင်မြဲစွာ ချည်နှောင်နိုင်ရန်၊ ဓာတ်ငွေ့များကို လုံးလုံးလျားလျား ရှင်းထုတ်ရန်အတွက် ကြီးမားပြီး တူညီသော ဖိအားနှင့် သင့်လျော်သော အပူချိန်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပြီး ဖန်နှင့် PVB ဖလင်ကို လုံးလုံးလျားလျား ချိတ်ဆက်ကာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ မှန်၏ခိုင်ခံ့မှုကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက်နမူနာတစ်ခုလိုအပ်ပြီး 2.2Kg သံဘောလုံးကို4မီတာအမြင့်မှပြုတ်ကျသည်။
သံဘောလုံးသည် ဖန်ခွက်အတွင်းသို့ မဖောက်ဝင်နိုင်ပါက၊ မှန်သည် လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီသည်။
လေကာမှန်ကို လေကာမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လေကာမှန်ကို ပူသောကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် PVB ကြမ်းပြင်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ ဖန်သားနှစ်ပိုင်းကြားတွင် လေသည် ပိတ်မိနေပါသည်။ လေပူဖောင်းများအားလုံးကို မဖယ်ရှားမီအထိ အချို့သော အပူချိန်အောက်တွင် လေကို ဖယ်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် လေကာမှန်အစွန်းများကို PVB ၏ အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် ချည်နှောင်ထားခြင်းဖြင့် လေကာမှန်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် လေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်ရန်အတွက် ဖုန်စုပ်စက်အကြိုအလာမီနိတ်မီးဖို၊ ဖုန်စုပ်ကွင်းမီးဖို၊ ၎င်းသည် လေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်ရန်အတွက် ကြိုတင်အပူနှင့် ကြိုတင်ဖိအားများကို လက်ခံပါသည်။
၎င်းကို ကြိုတင်အပူပေးခြင်းနှင့် ကြိုတင်နှိပ်ခြင်းမီးဖိုဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်၊ တူညီစွာအပူပေးခြင်းအတွက် မော်တော်ကားမှန်သည် ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ကြိုတင်အပူပေးကိရိယာတစ်ခုနှင့် ပင်မထိန်းချုပ်ကိရိယာသို့ လျှပ်စစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် input display device ပါ၀င်သည်။ ကြိုတင်အပူပေးသည့်ကိရိယာတွင် conveyor belt ပါဝင်သည်။ ဦးတည်ချက်ကို အပေါ်လွှာဧရိယာ၊ အပူချန်နယ်၊ အအေးချန်နယ်နှင့် အောက်စာရွက်ဧရိယာတို့ကို အစဉ်လိုက် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ အပူပေးပြွန်ကို ချန်နယ်နံရံ၏ interlayer အပေါက်တွင် ထားခြင်းဖြင့်၊ အပူပေးပြွန်ကို မော်တော်ကားမှန်နှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။ လေမှုတ်စက်သည် လည်ပတ်နေသောလေလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် မော်တော်ယာဥ်မှန်၏ အပူပေးအခြေအနေများကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ပူသောလေကို အပူချန်နယ်သို့ အညီအမျှ ပေးပို့နိုင်စေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကို ထိရောက်စွာ တိုးတက်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အအေးခံချန်နယ်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်၊ လေအေးပေးပြီးနောက် ဖလင်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ကားမှန်မျက်နှာပြင်၏ အပူချိန် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ လက်ဗလာဖြင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် မီးလောင်မှု အန္တရာယ် မရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ဖုန်စုပ်စက်၏ လေဟာနယ် ချိတ်ဆက်မှု၏ အလိုအလျောက် လေဟာနယ်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် ဤလေဟာနယ်စနစ်။
● အလိုအလျောက် လေဟာနယ် အဆို့ရှင်ကို ပိတ်ပါ။
● အလိုအလျောက် ဆီလီကွန်ပိုက် ဖယ်ရှားခြင်း။
● အလိုအလျောက် ဖုန်စုပ်စက် ဆီလီကွန် လက်စွပ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
● အလိုအလျောက် ဆီလီကွန် လက်စွပ် ပြန်ပေးသည်။
မော်တော်ကားမှန်များကို လေထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် လေဝင်လေထွက်မှန်နှင့် နေကာမိုးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
မော်တော်ကားမှန်ဖုန်စုပ်စက်အကြို-laminate လုပ်ငန်းစဉ်သည် autoclave လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြိုတင်အပူပေးခြင်း၊ လေဟာနယ်အကြိုနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။
FZVPL-2000 အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်: 16-25s/pc (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
W/S ကို conveyor ပေါ်တွင် နေရာချပြီး vacuum line ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ WS ကို အပူမပေးမီ ဖန်ပြားများကြားရှိ လေကို ဆွဲထုတ်ရန်အတွက် ဖုန်စုပ်စက်ကို ဆွဲထုတ်ပါသည်။
Automotive Glass Windscreen ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှာ Vacuum Pre- Laminate စက် ပါဝင်ပါသည်။
● ကွေးနေသော လေကာမှန်ကို တင်သည့်စနစ်
● Cold De-airing Section၊
● ပူပြင်းသော လေထုတ်လွှတ်မှုအပိုင်း၊ အပူပေးထားသော လေလည်ပတ်မှု အခြောက်ခံလိုဏ်ခေါင်းကို အပူပေးပိုက်၊ ပန်ကာ၊ အခန်း၊ လေပြွန်နှင့် အလိုအလျောက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
● Cooling Section၊ အအေးခံပြီးနောက်၊ ဖန်သားပြင်၏ အပူချိန်သည် 55°C ထက်မမြင့်ပါ။
● အလိုအလျောက် Valve ပိတ်ခြင်း၊ စပရိန်တုံးသည် ဖုန်စုပ်စနစ်နှင့် မှန်ကွင်းချိတ်ဆက်မှုကို ဖြတ်တောက်ရန် အရေးကြီးသောအနေအထားသို့ ဘောလုံးအဆို့ရှင်လက်ကိုင်ကို တွန်းပို့သည်။
● Hose Remove System၊
● Unloading Section, Conveyor system with vertical glass support.
● ဖုန်စုပ်စနစ်၊ ၎င်းကို ဖုန်စုပ်ပန့်၊ လေသိုလှောင်ကန်၊ အကွာအဝေးဖိအားအချက်ပေးစနစ်နှင့် အခြားအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
● လေထုတ်ပြီးနောက် လေကာမှန်များကို စစ်ဆေးခြင်း (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)၊ ၎င်းသည် Canada DALSA လိုင်းစကင်န်ကင်မရာ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 8K (8192 ပစ်ဇယ်)၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားတိုင်းကိရိယာတစ်ခုနှင့် အသံကြားနိုင်သော မြင်ကွင်းဆိုင်ရာ အချက်ပေးကိရိယာကို မျက်နှာပြင်ပိတ်ခန်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လေဟာနယ်စနစ်တွင် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက (လေဟာနယ်ဖိအား -0.08Mpa ထက်နည်းသည်)၊ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန် အော်ပရေတာအား သတိပေးရန် အချက်ပြမှုတစ်ခု ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
● နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို တည်းဖြတ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကန့်သတ်ဘောင်ဆက်တင်ကို အပြီးသတ်ပြီးနောက်၊ ဖန်သားပေးပို့ခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ ဖုန်စုပ်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်သွားပါသည်။
● လွတ်လပ်သော ပါဝါမောင်းနှင်မှု ယန္တရား၊ ချိန်ညှိနိုင်သော အမြန်နှုန်း ပြောင်းလဲခြင်း။
● ဒေါင်လိုက်ဖန်များကို စတီးလ်စတီးလ်စတုဂံပြွန်များဖြင့် ဂဟေဆော်ထားပြီး၊ ပိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကန့်လန့်ဖြတ်အထောက်အပံများကို ဖန်တုံးသယ်ဆောင်ရန်အတွက် စီလီကာဂျယ်အချောင်း3ခု တပ်ဆင်ထားပါသည် (ဖန်၏အစွန်းများကို ပေါက်ကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်) နှင့် ဆီလီကွန်အစွန်းလက်ခံသည့်ဖန်တုံးကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ဝက်အူများဖြင့် L ဘုတ်သည် ချော်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ EPDM ရာဘာမှတ်တိုင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ပံ့ပိုးမှုများ၏အဆုံး၊ ပံ့ပိုးမှုများ၏အဆုံးတွင် ကော်ပတ်ထားသော နှစ်သက်ရာအတိုင်း ကောင်းစွာတွဲထားသည်။
● မြင့်မားသောအပူချိန် (100°C) ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဆီလီကွန်အိမ်
● ရော်ဘာသည် ပလတ်စတစ်မှ EPDM သို့ ပစ္စည်းကို ရပ်တန့်စေသည်။
1.2 နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
အများဆုံး Glass အရွယ်အစား 2000*1300 မီလီမီတာ
အနိမ့်ဆုံး Glass Size 1000*500 မီလီမီတာ
Glass Thickness 3.2 မီလီမီတာ –6မီလီမီတာ
Conveyor အမြင့် 850mm +/- 30 mm (စိတ်ကြိုက်)
Bend ၏အတိမ်အနက် အများဆုံး 250 မီလီမီတာ
ကွေးကောက်ခြင်း။ အများဆုံး 50 မီလီမီတာ
စွမ်းရည် 16-25s/pc (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
စုစုပေါင်းပါဝါ 220 KW
အတိုင်းအတာ 14970L*3400W*3100 mm (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
ဗို့အား/ကြိမ်နှုန်း 380V/50Hz 3ph (စိတ်ကြိုက်)
PLC ဗို့အား PLC 220V
ဗို့အားကို ထိန်းချုပ်ပါ။ 24VDC
ဖိထားတယ်။ 0.6-0.7 Mpa
● ဒီဇိုင်းက ရောင်းလို့ရတယ်။ သင့်တွင် အသံအတိုးအကျယ် လိုအပ်ချက်များရှိပါက၊ တိုတောင်းသော လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် နေရာလွတ်ကို သက်သာစေမည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော ကုန်ကျစရိတ်များသည် အရွယ်အစားပြည့်မျဉ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
● သင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းသည် အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ဤလိုင်းများကို ရိုးရှင်းသောပုံစံများဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်သင့်သည်။ သင်သည် လေဟာနယ် WSs၊ SLs၊ SRs များကို ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ၊ လေဟာနယ် မီးဖိုတွင် နက်နဲသော ကွေးညွှတ်မှုများ မရှိဘဲ ဖယ်ရှားနိုင်ပါမည်။
● ဖန်ပူဖောင်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချရန် အပူနှင့် အအေးပေးစနစ်အတွက် အထူးဒီဇိုင်း။
● ကြိမ်နှုန်း အင်ဗာတာ ပါသော ပိုက်လိုင်း။
● မှန်ပါဝင်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် သင့်လျော်သော အာရုံခံကိရိယာများ တပ်ဆင်ပါမည်။
● အလိုအလျောက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
● အမြန်ဖြုတ်တပ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကွန်ဗင့်အပေါ်ပိုင်းတွင် အပူပေးသည့် အဓိကကိုယ်ထည်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။
● အပူပေးခန်း၊ အအေးခံခန်းနှင့် အပူချိန်ခံနိုင်သော ကင်းဗတ်ကာကာဖြင့် သီးခြားခွဲထားခြင်း။
● Cooling Circulating Air System
မော်တော်ကား လေကာမှန်မှန် ပြုပြင်ရေး စက်ယန္တရား
● Glass Cutting, Breaking, Grinding Machines
● Flat Glass Washing and Drying Machine
● Glass Silk Screen Printing၊ အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အအေးခံစနစ်
● Talcum Powder မှုတ်စက်
● Glass Bending Furnace
● ကွေးထားသော မှန်အဝတ်လျှော်နှင့် အခြောက်ခံစက်
● PVB Assembly Line Automotive (PVB Film ကို ဖန်2ချပ်ကြားတွင် ညှပ်ထားသည်)
● ဖုန်စုပ်စက်အကြို-Laminate စက် (တပ်ဆင်ထားသော မှန်များကို လေထုတ်ခြင်း)
● နောက်ကြည့်မှန်ခလုတ် ကွင်းပိတ်
● Glass ထုပ်ပိုးခြင်း။
ယခင်- အလိုအလျောက် PVB စည်းဝေးပွဲလိုင်း လေကာမှန် အကာအရံစက်များ
နောက်တစ်ခု: လေကာမှန်များ နှင့် ဘေးတိုက်များအတွက် လေထုတ်ခြင်းစနစ်
Manual PVB တပ်ဆင်မှုလိုင်း ကားလေကာမှန်တပ်ဆင်ခြင်း။
အလိုအလျောက် ဖုန်စုပ်ပိုက်ကို ဖယ်ရှားပါ။
အလိုအလျောက် PVB စည်းဝေးပွဲလိုင်း လေကာမှန် အကာအရံများ...